Iindaba - Ngaba usazikhetha iindondo zelanga ezijikelezileyo kunye nezesikwere?
Ngaba usazikhetha iindondo zelanga ezijikelezileyo nezisisikwere?
Izibuko zelanga ziye zaba zezinye zezinto eziyimfuneko esitratweni. Ngaba usazikhetha iindondo zelanga ezijikelezileyo nezisisikwere?
Xa uhamba esitratweni, into yokhuselo lwamehlo zizibuko zelanga. Kutshanje, ifashoni yezakhelo ezingaqhelekanga ziye zavuthelwa cwaka kwimveliso yezincedisi. Olu hlobo lweiglasi alunakulingana ngokuchanekileyo nasiphi na isimbo sokunxiba, kodwa sikungenise nakwindawo elula yemihla ngemihla. Ngokungaqhelekanga ngokungaqhelekanga, lolona khetho lufanelekileyo lokufota esitratweni ukubonisa ubuntu bayo.
Le mveliso isebenzisa uyilo olumilise ibhabhathane kunye noyilo olungagqibelelanga olungenamda ukongeza amandla kubomi bemihla ngemihla obukruqulayo kunye nokutsala umdla wabantu naphi na.
Iipads zempumlo ze-silicone zinokunciphisa uxinzelelo empumlweni, zikwenze ukhululeke ngakumbi ukunxiba. Izinto zesakhelo sisinyithi, kwaye izinto zelensi yi-AC. Kukho imibala esi-7 yezi glasi, ezinokumelana nayo nayiphi na impahla oyithandayo.
Sinle ikati yesibuko esinezibuko zodidi lweklasi iimilo zelanga zabasetyhini,
I-2019 ENTSHA yokufika kwehlobo elineesakhelo ezincinci zelanga zangaphandle zeFashoni yoyilo lweeGIrls Baby Retro Cat Eye Wear INS Ixabiso eliphantsi, eliyilayini ephezulu yefashoni kwiiglasi zelanga ezigqunyiweyo zeMetter Butterfly Sunglass, i-Designer butterfly shape shades yabasetyhini imibala yeesilazi zelanga, Iibhola ezinkulu zeblue butterfly Women 2018 Brand Designer Ikati wamehlo aBomvu oMdaka ngombala weGilasi zeLanga, Ukujonga ngaphezulu kwezibuko zesikwere zabafazi abaMnyama abaPinki abaKhulu ngeLanga iiglasi zamadoda Amanqaku eVenkile yokuVuna iRetro eyewear iOculos.